Home News Afhayeenka Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedka oo ka jawaabay warmurtiyeedkii MW Waare
Afhayeenka Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedka oo ka jawaabay warmurtiyeedkii MW Waare
Afhayeenka Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyadda isla markaana ah Wasiirka Dastuurka ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdullahi Shiikh Xassan ayaa maanta Shir Jaraa’id oo uu qabtay uga hadlay warmurtiyeedkii ka soo baxay MW Waare.
Mudane Cabdullahi Shiikh Xassan ayaa ku tilmaamay wax lala yaabo qoraalkii ka soo baxay MW Waare. Wasiirka ayaa sheegay in MW Waare isaga baxay Golaha Iskaashiga, xaqna uusan u laheyn in gole oo isaga baxay in uu hadana ka daba hadlo. Afhayeenka ayaa sidoo kale ku dheeraday in Golaha Iskaashiga ku muujiyeen dareenkooda qoraalkii ay horay u soo saareen kaas oo ahaa in MW Waare uu xaq u leeyahy in uu ku hogaamiye Dowlad Goboleedka Hirshabeela meeshii uu isleeyahay danta degaanka uu ka taliyo ayaa ku jirto. Waxaana uu sheegay in ayan dhib u arkin in uu go’aan ka gaaro ayaha deegaanka uu ka taliyo.
Afhayeenka ayaa sheegay in qoraalka maanta ka soo baxay MW Waare uusan qusaynin Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyadda. Waxaana uu kula taliyay MW Waare in uu ku mashquulo danaha dadka Degaanka Hirshabeele oo dhibaato badan haysatao inta uu ku mashquuli lahaa Deegaano kale oo aan isaga qusaynin.
Dad badan ayaa qaba in qoraalka uu MW Waare soo saaray maanta looga soo dhiibay xafiiska RW Kheyre.
Halkaan ka daawo shirka Jaraa’id ee Cabdullahi Shiikh Xassan;
Previous articleWar Deg Deg ah:-Agaasimaha Hay’adda Nabad-Sugida iyo Sirdoonka Qaranka oo Si Rasmi ah Iskucalisay!!
Next articleDowladda Soomaaliya oo ka Hadashay Weeraradii ka dhacay Magaalada Baydhabo Ee Gobolka Baay
Rag loosoo qab-qabtay Dil sargaal ciidamada Xoogga ka tirsan loogu geeystay...